Great Theft Auto: Rusununguko Guta Nyaya uye San Andreas ari kutengeswa kwenguva shoma | IPhone nhau
Great Theft Auto: Rusununguko Guta Nyaya uye San Andreas iri kutengeswa kwenguva shoma
Nguva nenguva, vanogadzira vanopa maapplication avo mahara zvachose kana kupa muto unonaka pamutengo wavo, kuyedza kutenga zvavanoshandisa kana mitambo. Pane dzino nhambo chikumbiro hachina muripo asi iwe uri kugamuchira yakakosha dhisikaundi. Mutambo GTA: Liberty City Nhau uye San Andreas vane mutengo wenguva dzose we6,99 euros ivo vadzikisa mutengo kusvika ku2,99 euros uye 3,99 euros zvichiteerana.
1 Zvimiro zveGTA: San Andreas
2 GTA: Liberty Nhau maficha
3 Magadzirirwo uye zvinodiwa
Zvimiro zveGTA: San Andreas
• Yakakwira-resolution resolution yakadzoreredzwa uye yakagadzirirwa chaizvo nharembozha. Zvinosanganisira zvinowedzera mwenje, rakapfuma ruvara pendi, uye hunovandudzwa hunhu mamodheru.
• Inowedzeredzwa ine yakadzama, inesimba mimvuri uye chaiyo-nguva ambient kuratidzwa kweiyo iPhone 5 dzakateedzana uye iPad yechina chizvarwa uye pamusoro.
• Inopindirana neese maMFi anotonga epanyama.
• Inoenderana nekuchengetedza mugore kuti ugone kutamba pane ako ese iOS zvishandiso, yenhengo dzeRockstar Social Club.
• Kudzora uchishandisa matanda maviri eanalogog kudzora kamera uye kufamba.
• Matatu matatu akasiyana ekudzora masisitimu uye ekugadzirisa maratidziro ane sarudzo dzemamiriro ekuratidza mabhatani chete kana iwe uchiada.
GTA: Liberty Nhau maficha
• Mifananidzo mitsva yemavara uye zvigadzirwa musarudzo yepamusoro
• Mwenje nemimvuri munguva chaiyo
• Mutambo pa60 mafuremu pasekondi pane iPhone 6s, iPhone 6s Plus, uye iPad Pro
• Yakavandudzwa kuona daro
• Kudzora kwakadzora kwekubata skrini yekutamba
• Muchinjikwa-chikuva gore rekuchengetedza kuburikidza neRockstar Yemagariro Club
• 3D Kubata tsigiro inopa akawanda kutonga sarudzo
• Inoenderana netsika dzerwiyo *
• Kugarisana nekutonga kwepanyama
• Inotsigira Retina kuratidza, kusanganisira iPad Pro
Magadzirirwo uye zvinodiwa
Compatibility: Inoda zvirinani iOS 8 kana gare gare. Inoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod Kubata.
Midziyo inoenderana: Kutanga ne iPhone 5, kutanga nechitanhatu chizvarwa iPod Kubata, yechina chizvarwa iPad, iPad Mhepo / Mhepo 6, iPad Mini 4/2/2 uye iPad Pro 3 uye 4 inches.
Grand Theft Auto: San Andreas7,99 €
GTA: Rusununguko Guta Nyaya7,99 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Great Theft Auto: Rusununguko Guta Nyaya uye San Andreas iri kutengeswa kwenguva shoma
Mumwe mubvunzo… yanga isiri iyo Veki Guta Nhau Mutambo?
Kubva muna Chikumi, zvese zvinoshandiswa zvinofanirwa kutsigira chete IPv6